क्यान सुनसरीमा बढ्याे चुनावी सरगर्मी, कस्काे पल्ला भारी ? - Purbeli News
क्यान सुनसरीमा बढ्याे चुनावी सरगर्मी, कस्काे पल्ला भारी ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र १९, २०७६ समय: २३:२३:४१
इटहरी । कम्प्युटर व्यवसायीहरूको सङ्गठन कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल सुनसरी (क्यान सुनसरी महासङ्घ)मा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । यही भाद्र २१ गते क्यान सुनसरीकाे १३औं साधारण सभा तथा ८ औँ अधिबेशेनबाट नयाँ कार्य समिति चयन हुने भएककाे कारण चुनावी सरगर्मी बढेको हाे । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पदमा ३ जानाकाे उम्मेदवारी परेकाेमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार पुष्प अधिकारीको उम्मेदवारी फिर्ता भए सँगै विशाल बास्तोला र सन्देश राई बिच थप प्रतिस्पर्धा हुने पक्का छ ।
सङ्घको आगामी दुई वर्षे नेतृत्वका लागि दुई समूहले छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर चुनावमा होमिएका छन् । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार बास्तोला र राई दुवैले अफ्नाे प्यानलमा पूर्व अध्यक्षहरू तथा पदाधिकारीहरूकाे समर्थन रहेकाे र आफु जित्ने दाबी समेत गरेका छन् । ८ औँ अधिबेशेनबाट नयाँ कार्य समिति चयनका लागि अध्यक्ष, सदस्य र केन्द्रीय प्रतिनिधी गरी १७ सदस्यहरूका लागी मतादान हुुँदैछ ।
काे हुन् बास्ताेला
सुनसरीकाे धरानमा जन्मिएका बास्ताेला इटहरीमा विगत १० वर्ष यता पवित्रम ट्रान्सइकाेनाेमिक सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनि विभिन्न समाजसेवाहरूमा समेत सक्रिय रहेका छन् । उनले क्यान सुनसरीमा एक कार्यकाल जिल्ला सदस्य, दुई कार्यकाल कोषाध्यक्ष रही सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरिसकेका छन् । बास्ताेलाले भारतबाट इन्टरनेशनल बिजनेस स्टडिजमा पोस्ट ग्रेजुएट सम्मकाे अध्यान गरेका छन् । उनी राेटरी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा आवद्ध रहेका छन् ।
विजयी भएमा आफुले संथागत सुधार, आर्थिक रूपमा सक्षम, विज्ञ सदस्यताहरूकाे बृद्री, संस्थाकाे बेभ साइट निर्माण, क्यान इफाेटेक संचालन लगायतका कुराहरूमा जाेड दिने बताएका छन् । उनी पूर्व अध्यक्षहरू तथा समग्र सदस्यहरूले संस्थाकाे समग्र हितकालागी आफुलाइ विजयी गराउनेमा ढुक्क रहेकाे बताए । उनले क्यान सुनसरीलाई एक ढिक्का बनाइ जिल्लाका सबै स्थानीय तहरूमा सक्रिय रूपमा उपस्थिति गराउनुका साथै सबै पूर्व अध्यक्षहरू संग समन्वय गरी यस संस्थालाइ थप मजबुत बनाउन दिलाे ज्यानका साथ काम गर्नका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकाे बताएका छन् ।
काे हुन् राई
माेरङकाे बुढिगंगा जन्मिएका राई इटहरीमा विगत १० वर्ष देखी प्यारगन आइटी साेलुसन सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनले त्रिवेणी ग्रुप, सिपिएन, अल्पाबिटामा आइटी क्षेत्रमा राम्राे अनुभव समेत बटुलेका छन् । उनले दुवही स्थित Megha LLC Fze मा नेटवर्क इन्जिनियरमा रूपमा समेर राम्राे अनुभव संघालेका छन् । विज्ञान तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्नातकोत्तर सम्मकाे अध्यान पुरा गरेका राई जेसिस लगायत विभिन्न संध संस्थाहरूमा योजनाबद्ध रहेका छन् ।
राईले क्यान सुनसरीमा एक कार्यकाल जिल्ला सदस्य, एक कार्यकाल सचिव र उपाध्यक्ष पदमा रहि सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरिसकेका छन् । उनले अाफु विजयी भएमा संगठन सुदृण, संस्थाकाे सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता, विभिन्न आइटी कार्यक्रमहरू, सदस्यता बृद्री, लगायतका कुराहरूमा जाेड दिने बताएका छन् ।
बास्ताेला र राई दुवै सक्षम उम्मेदवार हुन् । उनीहरू दुवैकाे संस्थाप्रति ठुलाे याेगदान रहेकाे छ । क्यान सुनसरीका सदस्यहरू तथा पूर्व अध्यक्षहरू समेत विभाजित रहेकाे अवस्थामा धरानले निणायक भूमिका निर्वाह गर्नेमा दुइमत छैन । बास्ताेलालाई केही पूर्व अध्यक्ष तथा सदस्यहरूकाे साथ, नयाँ पुस्ताका सदस्यहरूको अाकर्षणका कारण जित सुनिश्चित देखिन्छ । राई पक्षमा केही पूर्व अध्यक्ष तथा सदस्यहरूकाे भाेटका कारण जित सुनिश्चित नै छ तथापी धरानका सदस्यहरूकाे मतले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेमा कुनै सन्देह छैन ।